February 7, 2020 - Tameelay
ကျွန်မ လွယ်လွယ်လေးနဲ့ စိတ်ဆိုးတတ် စိတ်နာတတ်တဲ့ မိန်းမမျိုးမဟုတ်ဘူး ။
February 7, 2020 Tameelay 0
ကျွန်မ လွယ်လွယ်လေးနဲ့ စိတ်ဆိုးတတ် စိတ်နာတတ်တဲ့ မိန်းမမျိုးမဟုတ်ဘူး ။ အချော့ခံချင်ရုံသက်သက်နဲ့ အကြောင်းမရှိ အကြောင်းရှာ မရစ်တတ်ဘူး ကျွန်မ နားလည်ခွင့်လွှတ်တတ်ပါတယ် စိတ်ဆိုးစရာရှိတဲ့အခါ ဆိုးတယ် ဒါပေမယ့် စိတ်ဆိုးတာက ပြန်ခွင့်လွှတ်လို့ရပေမယ့် စိတ်နာအောင်တော့ မလုပ်စေချင်ဘူး စိတ်ဆိုးတာ နဲ့ စိတ်နာမတူဘူးနော် မကွာပါဘူး အတူတူပဲလို့ မမှတ်နဲ့ […]
အိမ်ကို လွမ်းတယ် အမေ လို့သာ အော်လိုက်တာပါ တကယ်က အိမ်ဆိုတာထက် အမေ့ကို ပိုပြီးလွမ်းတာပါ လူတွေက နီးလွန်းရင် မမြင်တတ်ဘူးဆိုတာ တကယ် မှန်တယ် အမေ သမီးလဲ အမေ့ရဲ့ စေတနာတွေ မေတ္တာတွေကို အလုံးစုံမမြင်နိုင်ခဲ့ဘူး အဝေးကြီးကို ရောက်တော့မှ သမီးမှာ တန်ဖိုးတွေ သိလာရတာ […]
လုံလောက်တဲ့ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေ ရပြီးသွားတဲ့အခါ အလိုလို ဥပေက္ခာ ပြုတတ်လာပါလိမ့်မယ်
ဥပေက္ခာဆိုတာ သူဘာပဲပဲ လုပ်နေနေ ဘာကြီးပဲဖြစ်နေနေ လျစ်လျူရှုပစ်လိုက်တာမျိုးပါ . . .ဥပေက္ခာပြုလိုက်တယ်ဆိုတာ သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်အကြောင်းအရာမှ စိတ်မဝင်စားတော့တာပေါ့ ဥပေက္ခာပြုတတ်ဖို့ ဘာတွေလိုလဲဆိုရင် လုံလောက်တဲ့ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေပဲလိုပါတယ် စေတနာနဲ့ ထိုက်တဲ့သူကို စေတနာတွေ ပေးပြီး စေတနာနဲ့ မတန်တဲ့လူတွေကို ဥပေက္ခာပြုလိုက်ပါ ။ မေတ္တာက အရမ်းကို […]
ဖြစ်နိုင်ရင် ကတိတွေ လွယ်လွယ်လေး မပေးခဲ့တာပဲ ကောင်းပါတယ် ။ ပေးပြီးသားကတိတွေဆိုရင် အတတ်နိုင်ဆုံး တည်စေချင်ပါတယ်
ကတိဆိုတာကို လွယ်လွယ်လေးမပေးနဲ့ စိတ်ချမ်းသာရင်ပြီးရောဆိုပြီး ကတိတွေ လွယ်လွယ်ပေးလိုက်တဲ့အကျင့်ကို ဖျောက်ပါ . . . ကတိ ပေးတဲ့သူကပဲ မေ့ချင်မေ့သွားတာလေ ကတိတွေကို တကယ်ကြီး ယုံမိတဲ့သူက ဖြစ်မလာတဲ့အခါ ပိုပြီး နာကျင်ရပါတယ် နောက်တစ်ခါဆို . . . တည်နိုင်မယ်လို့ထင်တဲ့ ကတိတွေကိုပဲပေးပါ ။ […]
ဒုက္ခတွေဖြစ်တဲ့အခါ . . .ဘယ်သူ့လက်ကို ပြေးဆွဲရမလဲ
ကိုယ့်ကို လိုတဲ့အချိန်မှာ လူတိုင်းသတိရကြတယ် အကူအညီတစ်ခုခုတောင်းဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဆင်မပြေတဲ့အခါပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်အဆင်မပြေတဲ့အခါ ဘယ်သူ့လက်ကို ပြေးဆွဲရမလဲ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မသိဘူး အကူအညီတောင်းဖို့ မဟုတ်ပါဘူး ရင်ဖွင့်ဖို့လေးသက်သက်ကိုတောင် ဘယ် နားကမှ အလုပ်မအားကြဘူး ကိုယ်ပြောချင်တဲ့စကားတွေ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မြိုချပစ်လိုက်ရတာပါပဲ ဒုက္ခတွေဖြစ်တဲ့အခါ . . […]
ကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ကိုယ့်ဘဝကို ရပ်တည်နေနိုင်တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျေနပ်တယ်
ဂုဏ်ယူတယ် အကောင်းစားအစားအစာတွေစားလို့ တန်ဖိုးကြီးအဝတ်အစားတွေဝတ်ဆင်မှ လူရာဝင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီခေါတ်မှာ သာမာန်အစားအစာကိုစားပြီး မေတ္တာခြုံထည်ကိုလွှမ်းခြုံလို့ ရောင့်ရဲတင်းတိမ်နိုင်တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည်နူးတယ်။ မော်ဒန်မြင့်ကားကောင်းတွေစီးပြီး မစာနာမူနဲ့ချိုးနှိမ်တတ်တဲ့ လူတန်းစားတွေများတဲ့ဒီခေါတ်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ကိုယ့်ဘဝကို ရပ်တည်နေနိုင်တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျေနပ်တယ်။ တန်ဖိုးကြီးအလှအပပစ္စည်းတွေနဲ့ ပြင်ဆင်ခြယ်သနိုင်မှ လှတယ်ထင်ကြတဲ့ဒီခေါတ်မှာ ကိုယ့်ရင်ထဲကစိတ်ထားအလှနဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့နှလုံးသားတစ်စုံကို ပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂုဏ်ယူတယ်။ တစ်ကယ်တော့,ဘဝမှာ ရိုးသားမူနဲ့ကြိုးစားနေခြင်းဟာ သိက္ခာရှိရှိနဲ့လိပ်ပြာလုံလုံရှင်သန်နိုင်ပြီး ဖြူစင်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ […]
အလုပ် နဲ့ ခံစားချက်တွေကို ရောထွေးမပစ်လိုက်နဲ့ တစ်ခါက ကျွန်မ အသည်းတွေ ပိုးဆိုးပက်စက် ကွဲခဲ့ဖူးတယ် အနာဂတ်တွေအထိ အိပ်မက်တွေ အတူမက်ခဲ့ပြီးမှ လေထဲတိုက်အိမ်ဆောက်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်မျိုးလို သစ္စာဖောက်မှုတွေကြားမှာ ပျောက်ခြင်းမလှ ပျောက်ပျက်သွားခဲ့တာ ကျွန်မ အနာဂတ်တွေကော အိပ်မက်တွေကော ရည်မှန်းချက်တွေကော အစစအရာရာ ပြိုကျပျက်စီးသွားတဲ့အထိ ကျွန်မ အသည်းတွေ […]